मधेशीले सिंहदरवारसम्म आफ्नो पहुँच बनाए पनि त्यहाँ समानता पाएनन् (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » मधेशीले सिंहदरवारसम्म आफ्नो पहुँच बनाए पनि त्यहाँ समानता पाएनन् (अन्तरवार्ता)
मधेशीले सिंहदरवारसम्म आफ्नो पहुँच बनाए पनि त्यहाँ समानता पाएनन् (अन्तरवार्ता)
ESAHARATIMES Saturday, January 19, 20190No comments
सहमहामन्त्री, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल
मधेश आन्दोलनपछि राजनीतिप्रति युवाको आकर्षण निकै बढेको छ । चाहे त्यो मधेश आन्दोलन होस् या माओवादीको जनयुद्ध होस् । दुवै आन्दोलनबाट नेताको ठूलो जमातलाई जन्म दिएको छ । र, ती सबै युवा आफ्नो तर्फबाट बेहतर गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । मधेशवादी दल माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ । उता, सहिद परिवार, आन्दोलनकारी, घाइतेहरु मधेशवादी दलप्रति सन्तुष्ट देखिदैन । मधेशको समस्या समाधान हुनुको सट्टा बल्झिदै गइरहेको छ । यस अवस्थामा मधेशवादी दलका युवाहरुले के सोचिरहेका छन्, मधेशको समस्या समाधान गर्ने उपाय के हुनसक्छ लगायतका विषयमा राजपा नेपालका सहमहामनन्त्री संजय यादवसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानीः
मधेशमा यतिका बलिदानी तथा सहादत दियो त्यसको तुलनामा के कति उपलब्धी भयो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–अहिले मधेशमा जेजति देखिन्छ, ती सबै मधेसी सहिदका कारणले भएको हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जुन संरचना देखि रहनु भएको छ । ती सबै मधेश आन्दोलनका कारणले नै प्राप्त भएको हो । अर्थात संघीयता, राज्य पुनः संरचनाका जन्मदाता नै मधेश आन्दोलन हो र त्यो त्यतिबेला सम्भव भयो, जतिबेला मधेशी युवाले सहादत दिए । मधेशको मुद्दा आज उचाई लिएको छ, जुन मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ ती सबै मधेश आन्दोलनको नै देन हो । राष्ट्रमा मधेशलाई अहिले छुट्टै धारको रुपमा चिन्न थालेको छ । राज्यको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ मधेश । मधेशमा राज्यको विरुद्ध थुप्रै पटक आन्दोलन भए । ती आन्दोलनहरु आयो र गयो तर मधेश यस्तो शक्ति भयो, जसले राज्यको लागि गलगाँठ भएको छ । यही मधेश आन्दोलनका करण राजपा नेपाल गठन भएको छ । जसले मधेशका लागि निरन्तर संघर्षमा छ ।
जुन सँख्यामा, जुन अनुपातमा मधेशले सहादत दियो, जुन बलिदानी दियो त्यसको अनुपातमा उपलब्धी भयो कि भएन ?
–सदियौंदेखि यो राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदाय जो आफ्नो अधिकारका लागि यो राज्यसँग लडेर आफ्नो पहुँच सिंहदरवारसम्म बनायो । मधेशले सहादत नदिएको भए, राज्यसम्म हाम्रो पहुँच हुने थिएन । तर मैले यो भन्न खोजेको होइन कि मधेशको माग पूरा भइसकेको छ । मधेशले पहिचान पयो तर अधिकार पाएन । मधेशीले सिंहदरवारसम्म आफ्नो पहुँच बनायो तर त्यही समानता पाएन । मधेशी सहिदमाथि दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो व्यवहार भइरहेको थियो त्यसमा केही परिवर्तन आएको छ । मधेशको मुद्दा राष्ट्रिय मात्र होइन, आन्तराष्ट्रिय रुपमा फैलिएको छ, ती सबै मधेश आन्दोलनको कारणले सम्भव भएको छ । काठमाडौमा मधेशीलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आएको छ । कमसे काठमाडौले अब मर्सिया, धोती, मधेशी, भैया भन्न छाडेको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मधेश एउटा शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ ।
मधेश आन्दोलनमा जसले सहादत दिए, योगदान दिए, घाइते भए उनीहरुले हाम्रो योगदान र बलिदान खेर गएको छ भन्छन् नि ?
–सहिद शब्द नै आफैमा यति सम्मानित हो, जसलाई केही कुरासँग तुलना गर्न सकिदैन । र, यो सबैको नसिवमा हुँदैन । भौतिक धन, दौलत केही होइन । आज हामीसँग भोली अरुसँग हुन्छ । तर सहिदको सम्मान सिर्फ उसैका लागि हुन्छ । हो, सहिद परिवार र घाइतेहरुको गुनासो जायज छ । जेका लागि मधेश यत्रो आन्दोलन गर्यो त्यो प्राप्त हुन सकेन । सहिद के को लागि भयो । हामीले जे भोगेका छौं त्यो आउने सन्ततीले नभोगुन त्यसका लागि मधेशी युवाले सहादत दिएको थियो तर त्यो अझै प्राप्त भएको छैन । प्रदेश २ सरकार गठन भएको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रत्येक सहिदको परिवारबाट एकएकजनालाई जागिर दिने घोषणा गरेको छ । त्यो चाँडै नै कार्यान्वयन हुन लागेको छ । त्यस्तै, सहिद परिवार र घाइतेका लागि पनि सरकारले प्याकेजहरु घोषणा गर्दैछ । त्यसलै सहिद परिवार, घाइते तथा आन्दोलनकारीले कुनै कुराको चिन्ता लिनुहुँदैन । विस्तारै विस्तारै सबै माग पूरा हुनेछ ।
सहिद परिवारबाट एक एकजनालाई जागिर दिन निर्णय भएको ११ महिना भइसक्यो, हालसम्म कतिजनालाई जागिर दिएको छ त ?
–मधेश सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन चाँडै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । मैले थाह पाए अनुसार माघ ५ गते मनाउने बलिादनी दिवसको अवसरमा मधेश सरकारले केही नकेही घोषणा गर्नेछ । हामी त्यसको प्रतिक्षा गरौं । सरकारले अहिलेसम्म १६ वटा ऐन ल्याइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा लागेको छ । त्यससँगै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुने कुरै हुँदैन । मलाई विश्वास छ । प्रदेश २ का सरकारले सहिद परिवारलाई जागिर दिने विषयमा गरेको निर्णय अवश्य कार्यान्वय हुनेछ ।
मधेश आन्दोलनमा सबभन्दा बढी युवाको संलग्नता थियो, सहिदको लिस्ट हेर्दा सबै युवा नै छन् । त्यस हिसाबले राज्यमा युवाको पहुँच, पार्टीमा युवाको पहुँचलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–वास्तवमा सहिदको लिस्ट हेर्दा ८० प्रतिशत युवाहरु नै छन् । मधेश आन्दोलन युवाको भरमा नै चलेको थियो भने कुरा छर्लङ छ । आन्दोलनको मोर्चामा युवा अग्रपंक्तिमा हुन्थ्यो । प्रशासनसँग भिड्नका लागि युवा नै हुन्थ्यो । आज प्रदेश २ मा गठन भएको प्रदेशसभा र मन्त्रीमण्डलको लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि अधिकाँश युवाहरु नै हुनुहुन्छ । अर्थात मैले भन्न के खोजेको छु भने मधेशमा जसरी युवाले योगदान दिए त्यसरी नै उसले स्थान पनि पाइरहेका छन् । पार्टीलाई नै हेर्नुहुन्छ एकदुईजना बाहेक सबै युवा नै छन् । काँग्रेस, एमालेको भन्दा मधेशवादी दलमा यही कुरामा फरक छ । ती दलहरुमा बुढो नेताले पनि आफूलाई युवा भन्दै पार्टीमा टिकीरहेका छन् तर मधेशवादीमा तलदेखि माथीसम्म हेनुस् आफै थाह पाउनु हुन्छ । मधेश पोल्टिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ विगतमा भन्दा अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक परेको छ । अहिले राजनीतिकमा युवाको अत्याधिक सहभागीता रहेका छन् ।
तपाईले पार्टीमा युवाको सहभागीता बढेको भन्नुहुन्छ तर तपाईको पार्टी अध्यक्षमण्डलका त्यस्तो देखिदैन, पार्टीमा युवालाई नेतृत्व तहमा राखिएको देखिदैन नि ?
–पार्टी दुईटा कुराले चलेको हुन्छ । एउटा अनुभव र अर्को सांगठनिक संरचना । हवाई जहाजमा दुईजना पाइलट हुन्छ । को पाइलट पुरै ट्रन्ड हुँदैन । मुख्य पाइलटको सहयोगी हुन्छ । मुख्य पाइलट अनुभवी हुन्छ । त्यसमाथी थुप्रै जिम्मेवारी हुन्छ । पार्टीमा पनि त्यस्तै हुन्छ । केही नेता पुराना र अनुभवी रहनु पनि आवश्यक हुन्छ । जसले पुरै पार्टीलाई ड्राइभ गरेका हुन्छन् । यदि ट्रेड र अनुभवी भएन भने एक्सीडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । महन्थ ठाकुर हुनुहुन्छ । उहाँसँग राजनीतिकको लामो अनुभव रहेको छ । राजेन्द्र महतो मधेश आन्दोलनमै आफ्नो सम्पूर्ण जीवन विताइसक्नु भएको छ । शरतसिंह भण्डारीको पनि पंचायतकादेखिको अनुभव छ उहाँसँग । महेन्द्र राय यादव पनि कम्युनिष्ट राजनीतिकबाट निखारिएर आउनु भएका नेता हुनुहुन्छ । अनिल झासँग पनि मधेश आन्दोलनको राम्रो अनुभव छ । राजकिशोर यादव मधेश आन्दोलनबाट राजनीतिमा आउनु भएको छ । सबैसँग एक से एक अनुभव छ । राजपा नेपालको यो मिश्रण छ । धेरै प्रकारको फुल एकठाउँमा राख्नुभयो भने फुल नै रहन्छ तर त्यसलाई एउटा धोगामा बाँधनुभयो भने त्यो माला हुनजान्छ । राजपा नेपाल त्यस्तै पार्ट बनेको छ ।
तपाईको पार्टीको अध्यक्षमण्डल पावरफुल छ, उसले जे गर्छ त्यही सबैले मान्नुपर्छ, यतिका महासचिव, सचिवहरु छन् अरुको कुनै भूमिका देखिदैन अनि तपाईले कसरी युवाको भूमिका देख्नुभएको छ ?
–मधेश निर्माणकै क्रममा रहेको हुनाले पार्टी बन्ने कुरा हुँदैन, मधेशवादी दल पनि अहिले निर्माणकै क्रममा छन् । राजपा नेपाल गठन भएको एक भन्दा बढी भएको छ । अहिले सो दल निर्माणको क्रममा छ । निर्माणको क्रममा रहेका हुनाले अनुभवी व्यक्तिले नेतृत्व लिनुभएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि अहिले मधेशमा राजपा नेपाललाई सबै चिन्न थालेका छन् । सबै बुझ्न थालेका छन् । राजपा नेपालले शुरु गरेको आन्दोलनमा सहभागी हुन थालेका छन् । यो पनि एउटा उपलब्धी नै हो । र, यी कुरा एउटा अनुभवी नेताको लिडरसीपको कारणले मात्र सम्भव भएको छ ।
ठिक छ, राजपा नेपाल निर्माणका प्रकृयामा छ, तर निर्माणमा पनि युवाको सहभागित चाहिन्छ, उसको पनि त्यसमा लगानी चाहिन्छ नि तर त्यस्तो पाइएको छैन किन ?
–छन् । युवाको सहभागित छन् राजपा नेपाल निर्माणमा । नीति निर्माणदेखि लिएर विभिन्न सरोकारका विषयमा युवाहरुको सहभागित नै हुन्छन् । हालै विद्यार्थी संगठनको समयोजनमा म लगायत सुरेशमण्डल, मनिष सुमन, जेपी यादव, रामेश्वर राय यादव लगायतका युवा नेताको संलग्नता हुन्छ । पार्टीको विभिन्न गतविधिहरुमा युवाको सहभागीता हुन्छ नै । महाधिवेशनको तयारी चलिरहेको छ । युवाहरु त्यसको तयारीमा लागेको छ । एक दुई महिनामा युवाको सक्रियता अझै पाउन सक्नुहुन्छ ।
जसको बदौलत (सहिद तथा घाइते, आन्दोलनकारी) यो पार्टी बनेको छ, त्यसलाई यस पार्टीमा प्राथमिकतामा राखेको छैन भनि गुनासोहरु सुनिएका छन्, के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा ?
–तपाईले ठिक प्रश्न गर्नुभयो । र, यो प्रश्नको जवाफ जनताले पनि थाह पाइराख्नुपर्छ । देशको पार्टीमध्ये राजपा नेपाल एउटा यस्तो पार्टी हो जो सहिद परिवारलाई सम्मान दिएको छ । प्रदेश दुई प्रदेशसभामा बविता चौधरीलाई समानुपातिक प्रदेशसभाको सदस्यमा राखिएको छ । मधेश आन्दोलनमा सहिद परिवारलाई सम्मान गर्ने काम राजपा नेपालले मात्र गरेको छ । यो हाम्रो शुरुवात हो । सहिद परिवारलाई जागिर दिने काममा राजपा नेपाल लागि परेको छ । अन्य सवैधानिक नियुक्ति तथा राजनीतिक नियुक्तिमा ल्याउने कुरा उठि रहेको छ ।
कार्यान्वयन हुनु र कुरा उठ्नु फरक कुरा हो । अब कुरा होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ, कार्यान्वयन कहिले हुन्छ त ?
–आन्दोलनमा लागेका व्यक्ति, आन्दोलनमा सहादत दिएका परिवार, घाइतका लािग राजपा नेपाल दिन रात लडिरहेको छ । आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाय गर्नका लागि सदनदेखि सडकसम्म अवाज उठाई रहेको छ । आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता, घाइतेका लालपालन लगायतका मुद्दामा राजपा नेपाल लडि रहेका छ । त्यही भएर हालसम्म सरकारमा पनि सहभागी भएको छैन । अझै ती माग पुरा नभए सरकारमा सहभागी नहुने कुरा राजपा नेपालले भनिसकेको छ । हालै राजपा नेपालका सांसद जो थुनामा हुनुहुन्छ उहाँलाई शपग ग्रहण खुवाउन लगाएको छ । उहाँको रिहायका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । अर्थात राजपा नेपाल मधेशको मुद्दामा प्रतिवद्ध भएर लागेको छ । आन्दोलनमा घाइतलाई सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिलाएको छ । कतिपयको मुद्दा पनि फिर्ता भएको छ ।
तपाई यस्तो भन्नुहुन्छ तर सहिल परिवार तथा घाइतेहरु कोही पनि सन्तुष्ट छैन किन ?
–यो कुरा मैले अघि पनि भनेको थिए कि सहिदको सम्मानको अगाडि सबै सम्मान फिका हुन् । माग गर्नु अनुसार सबैले पुरा गर्न सक्दैन । सबैको इच्छा सबैले यो संसारमा पुरा गर्न सक्दैन तर सकभर हाम्रो कोशिस हुनेछ छि सबैको माग पुरा होस् । कुनै पनि सहिद परिवार मधेशमा दुख नपायोस् । मधेशका लागि आन्दोलन गरेकाहरु सबैले अधिकार पाउन तर माग भने चिज नै यस्तो जो कहिले पूरा हुुँदैन ।
तपाईसँग अहिलेसम्म जति कुरा गरेका छौं, त्यसको सबै जवाफमा तपाईले भन्नुभएको छ कि हामी गर्दछौं, हुँदैछ, छिटो हुँदैछ तर कार्यान्वयन भयो भने भन्नुभएको छैन, तपाई जस्ता युवाहरुले पनि यस्तै जवाफ दिने हो भने राजनीतिकको अगामि भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
–म पनि आन्दोलनमा चारपटक टाउको फुटाइसकेका छौ । आन्दोलनमा बल्ल बाँचेको हुँ । म आन्दोलनकारी, घाइते, सहिद परिवारको पीडा बुझ्छौ । हाम्रा दलका नेतृत्वकर्ताहरु सहिदको सपना पुरा गर्न लागि पर्नुभएको छ । सहिद परिवारका लागि केही नकेही न गर्ने योजना बनाइ रहनुभएको छ । यदि सहिल परिवार, घाइते, आन्दोलनकारीका लागि गर्नुभएको वाचा पुरा गर्नुभएन भने त्यसका लागि हामी युवाले दवाव दिनेछौ । आवश्यक पर्यो भने हामी नेतृत्वको विरुद्धमा आन्दोलन नै गर्छौ तर सहिद तथा घाइते परिवारको माग र मधेशको अधिकार प्राप्त हुनैपर्छ ।